बांकेको कोहलपुरमा टन्टलापुर घाममा सडकमै यसरी धर्ना बस्ने ब्यक्ति यि को हुन् ? के होला यिनको माग ? (भिडियोसहित) « Light Nepal
बांकेको कोहलपुरमा टन्टलापुर घाममा सडकमै यसरी धर्ना बस्ने ब्यक्ति यि को हुन् ? के होला यिनको माग ? (भिडियोसहित)
Published On : 14 September, 2018 3:58 pm
कोहलपुर, २९ भदौ । बाँकेको कोहलपुर तराईको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउ मध्ये एक हो । कोहलपुरमा भदौ महिनाको यो समयमा गर्मीका कारण दिउसोको समयमा छाता विना पैदल समेत हिड्न सकिन्न । तर त्यही टन्टलापुर घाममा एक जना ब्यक्ति कोहलपुरको चौराहा नजिक ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय अगाडी धर्ना बनेका छन् । सडकको जमिनमै पलेटी कसेर धर्ना बसेका उनलाई बाटोमा हिड्नेहरुले आश्चर्य मानेर हेरिरहेका छन् ।
कोहलपुर स्थित ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालयमा छिरेको राजनीतिले चर्काे रुप लिएको छ । केही समय अघि सम्पन्न भएको अधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरीको छिनोफानो भएको छैन ।
सामुदायिक पुस्तकालयमा अधिवेशन देखि अहिले सम्म भएका गतिविधिको सूचना माग्दै शुक्रवार एक जना पुस्तकालयका आजिवन सदस्य पुजन विश्वकर्मा भदौको टन्टलापुर घाममा सडकको जमिनमै बसेर धर्ना सुरु गरेका छन् ।
आफुले अधिवेशनका बारेमा सूचना समेत नपाएर सहभागी हुन नपाएका कारण अधिवेशन सम्बन्धि जानकारी जान्न चाहेको उनले बताएका छन् । तर सामुदायिक पुस्तकालयले आफुलाई सूचना दिन आनाकानी गरेका कारण धर्नामा बस्नुपरेको उनले बताएका छन् । आफुले लामो समय देखि सूचना माग गर्दै पुस्तकालयमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ ।
सामुदायिक पुस्तकालयमा केही महिना अघि भएको अधिवेशनको विषयलाई लिएर दुई समुहविच विवाद कायम छ । महाधिवेनलाई मध्यनजर राखेर नयाँ सदस्य जथाभावी वितरण गरिएका कारण निर्वाचन प्रभावित भएको भन्दै दोस्रो पक्षले सो अधिवेशनलाई वैध मानेको छैन ।
तत्कालिन सचिव विष्णु वेल्वासे सहित केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले विधान विपरित महाधिवेशन गरिएको भन्दै त्यसलाई बैध मानेका छैनन् । उनीहरुले पुस्तकालयमा चरम राजनीति भएको बताएका छन् । धर्नामा बसेका विश्वकर्माले पुस्तकालयमा नेपाली कांग्रेस समर्थकले एकलौटी गर्न खोजेको बताए । पुस्तकालयमा कांग्रेसका नेताहरुको मात्र तस्बिर राखिएको भन्दै उनले राजनीति गरेको बताए ।